सर्वोच्चको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी अनसन स्थलबाटै पक्राउ ( भिडियो सहित ) - ThikThak Nepal
Home / news / सर्वोच्चको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी अनसन स्थलबाटै पक्राउ ( भिडियो सहित )
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै डा. केसीले सोमबार ४ बजेबाट १४ औं आमरण अनसन थालेका थिए । आफ्नो अनसनका क्रममा चार वर्षअघि बर्खास्त भएका डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको डीनमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि डा. केसी आक्रोसित भएका थिए । अनसन सुरु गर्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले अदालतमा न्यायको किनबेच हुने गरेको मात्र दाबी गरेनन्, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई माफियाको डनको संज्ञा दिए ।
तर, त्यसको केहीबेरमै डा. केसीविरुद्ध अदालतको मानहानीको मुद्दा मात्र परेन, पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश आयो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले डा. केसीलाई पक्राउ गरी भोलि विहान ९ बजे उपस्थित गराउन आदेश दियो । अदालतको आदेश आएको तीन घन्टापछि महानगरीय प्रहरीको टोलीले डा. केसीलाई अनसन स्थलबाटै उठाएको हो ।
प्रहरीले पक्राउ पूर्जी थमाएपछि डा. केसीले प्रहरीले जहाँ लैजान्छ, त्यही अनसन बस्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका डा. केसी ‘अदालतको फैसलालाई नमान्ने तर, कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने’ भन्दै प्रहरी टोलीसँगै जान तयार भए । उनलाई अहिले सिंहदरबार बृत्तमा राखिएको छ ।
भिडियो >> >
सर्वोच्चको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी अनसन स्थलबाटै पक्राउ ( भिडियो सहित ) Reviewed by ThikThak TV on January 08, 2018 Rating: 5